यस्तो भए २०७२ सालको भूकम्पमा २२ घन्टा पु’रिएका सोनिस ! – Ramailo Sandesh
निलो टिसर्ट र हाफ पाइन्ट लगाएका फुच्चे केटो दुगुर्दै कोठाभित्र पसे। उनको हातमा स्कुलको रिजल्ट थियो। पछिपछि उनकी आमा रश्मिला अवाल थिइन्। ‘खोइ, खोइ! रिजल्ट हेरौं त,’ हाम्रो आवाज सुनेर उनी एकछिन अलमलमा परे। ढोकामै अडिएर आमाको अनुहारतिर हेरे।यसरी कोठामा नयाँ मान्छे आउनु उनको निम्ति सामान्य थियो सायद। उनी अप्ठ्यारो नमानिकनै हामीनजिक आए। रिजल्ट देखाउँदै प्रत्येक विषयको ‘ग्रेड’ ठूलो स्वरमा सुनाउन थाले, ‘ए-प्लस, बी-प्लस, डी-प्लस, सी-प्लस, बी-प्लस…।’ २०७२ वैशाख १२ को भु’इँचालो बेला भक्तपुर, मूलढोका-४ को एक भ’ग्नावशे’ष घरमा २२ घन्टा पु’रिएर उ’द्धार गरिएको बालक तपाईंहरूलाई याद छ नि!
त्यसो त उनलाई भेट्न भनेर पुनर्निर्माण कार्यालयबाट दुईपटक मान्छे आएका रहेछन्। उनीहरूले आशा त देखाइरहे, तर अहिलेसम्म केही गरेका छैनन्। ‘कतिपटक त आफैंले फोन गरिसकेँ। म त माग्नेजस्तै भइसकेँ भन्या। बेकार फोन गरेर पैसा मात्र सकिने,’ उनले फेरि दोहोर्‍याइन्, ‘हुन त हामीजस्तो पी’डित अरू पनि होलान् नि।’घर बनाउन न’पाउँदाको मा’नसिक असर रश्मिलाको दि’मागमा मात्र होइन, परिवारमै फैलिएको छ। सोनिसले पनि बेलाबेला भनिरहन्छन् रे, ‘ममी यहाँ नबस्ने, हामी आफ्नो घर कहिले बनाउने?’ हामीले उनलाई सोध्यौं, ‘यहाँ बस्न किन मन लाग्दैन?’ चु’लबुले पारामा सोनिसले जवाफ फर्काए, ‘अरूको घर हो नि त।’सेतोपाटि बाट